Tsy azo ihodivirana ny vavaka ataon'ny tena manokana
«Mitadiava an'i Jehovah sy ny heriny, katsaho mandrakariva ny tavany.» - 1 Tant. 16:11
Fony Jesôsy teto an-tany dia nampianariny hivavaka ny mpianany. Nampianariny izy ireo hitondra izay ilainy isan'andro ho eo amin' Andriamanitra sy hametraka eo Aminy ny zava-manahirana azy. Ary ny toky nomeny azy ireo fa hohenoina ny fangatahany dia toky ho antsika koa.
Manàna toerana fanaovanao vavaka manokana. Nifidy toerana hiraisany tamin'Andriamanitra i Jesôsy, ary tokony hanao toy izany koa isika. Ilaintsika ny mitokana amin'ny toerana iray, na tsotra dia tsotra aza izany toerana izany, mba hifandraisana manokana amin'Andriamanitra (...)
Ao amin'ny toerana miafina fivavahana, izay tsy misy maso mahita afa-tsy ny an'Andriamanitra,tsy misy sofina mandre afa-tsy ny an'Andriamanitra, dia azontsika borahina amin'ilay Ray manam-pangorahana tsy misy fetra ny faniriantsika sy ny hetahetantsika miafina indrindra, amin'izay dia hiteny ao am-pontsika ao amin'ny fitsaharana sy fahanginan'ny fo ilay feo izay mamaly mandrakariva ny fitarainan'ny olombelona manampahasahiranana (...)
Rehefa mifidy an'i Kristy ho mpiara-dalana amintsika isan'andro isika dia ho tsapantsika fa manodidina antsika mandrakariva ny herin'ny tontolo tsy hita maso; ary noho ny fibanjinantsika an'i Jesôsy dia hanahaka ny endriny isika. Voaova amin'ny alalan'ny fibanjinana isika. Voalefaka sy voadio ary voasandratra.
Ho an'ny fanjakan' ny lanitra ny toetra. Ny vokatra azo antoka avy amin' ny fifandraisantsika sy fiarahantsika amin’ ny Tompontsika dia ny fitomboan'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny fahadiovana sy ny hafanam-po. Hampitombo ny fahazavan-tsaina ny fivavahana. Hahazo fanabeazana avy amin'Andriamanitra isika, ary izany dia hiseho amin'ny fiainana feno fahavitrihana sy hafanam-po.
Ny fanahy izay manatona an'Andriamanitra mba hahazo fanampiana sy fanohanana ary hery amin' ny alalan'ny vavaka mafana isan'andro dia hanana fironana ambony, fahatakarana mazava ny fahamarinana sy ny adidy, fikendrena ambony eo amin'ny asa atao, ary ho noana sy hangetaheta mandrakariva ny fahamarinana. Amin'ny alalan'ny fihazonantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia ho azontsika atao ny hanapariaka amin'ny hafa, amin'ny alalan'ny fifandraisantsika aminy, ny fahazavana sy ny fiadanana ary ny fahatoniana izay manjaka ao am-pontsika. Ny hery azontsika amin'ny alalan'ny fivavahana amin'Andriamanitra, miaraka amin' ny fiezahana mitohy hanazatra ny saina amin'ny fitsinjovana ny hafa, dia manomana antsika hiatrika ny adidintsika isan'andro ary mitahiry ny fanahintsika ho manam-piada-nana na inona na inona toe-javamiseho.